Wararkii ugu dambeeyey kulanka taariikhiga ah ee hoggaamiyaasha Mareykanka iyo W/kuuriya | Baydhabo Online
Wararkii ugu dambeeyey kulanka taariikhiga ah ee hoggaamiyaasha Mareykanka iyo W/kuuriya
Jasiiradda Sentosa ee Dalka Singapore, waxaa ka bilowday Shirka u dhaxeeya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trum iyo Hogaamiyaha Kuuriyadda Waqooyi Kim Jong-un, iyada oo labada Hoggaamiye ay is gacan qaadeen.
Shirkan oo ah kii ugu horeeyay oo ay labada dhinac yeesheen ayaa waxa ay kaga wada hadli doonaan, arrimo ay ka mid tahay Hubka Nugleerka iyo cunaqabateenada dhinaca dhaqaalaha ee saaran Kuuriyada Waqooyi.
Waxa ay wada qaateen kulan 40 daqiiqo ah oo ay goob joog ka ahaayeen Turjumaanada labada dhinac oo kaliya ka hor inta aysan kusoo biirin fadhiga lataliyaasha iyo Wafuuda kale ee labada Madaxweyne.
Donald Trump ayaa sheegay in uu rajeynayo in uu dhexmaro isaga iyo Kim xiriir weyn oo taariikh ah,halka dhigiisa uu isna yiri “kulankeena halkaan waxaan rajeynayaa in uu meesha ka saaraan dhammaan caqabadaha ”
Washington, waxa ay dooneysaa in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasusho Hubka Nugleerka, halka Waqooyiga Kuuriya ay diidan tahay taasi oo la aamisan yahay in ay adkeyn karto xaaladda.
Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa hanjabaadyo hawada isku marinayay in muddo ah oo dhinaca Nugleerka.
Hoggaamiyaha Waqooyi Kuuriya waxa uu sheegay in taariikh weyn ay tahay hadii labada dhinac ay heshiis rasmi ah gaaraan.
Ajandaha waxaa kamid ah ka sakoow Hubka Nugleerka cunaqabeteynta saaran Waqooyiga Kuuriya ee ragaadisay dhaqaalaha Dalkaasi.